समलैंगिक यौनसम्बन्ध भनेको के हो ? – Online Bichar
समलैंगिक यौनसम्बन्ध भनेको के हो ?
Online Bichar 14th January, 2018, Sunday 12:29 AM
समलैंगिक यौनसम्बन्ध भन्नाले उस्तै लिंगका दुई व्यक्तिबीच स्थापित यौनसम्बन्ध हो । यो कुनै रोग होइन । यसलाई सन् १९७५ मै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकार गरेर घोषणा गरिसकेको छ । समलिंगी यौनसम्बन्ध एउटा प्रवृत्ति हो, जुन अल्पसंख्यक व्यक्तिमा हुन्छ । यो जिनको प्रभावबाट हुन्छ भन्ने तथ्य पनि वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका छन् ।
सामान्यतया समलिंगी यौनसम्बन्ध दुई किसिमका हुन्छन्– मनोवैज्ञानिक वा जन्मजात् र व्यावहारिक वा पछि सिकेर । मनोवैज्ञानिक वा जन्मजात समलिंगीहरू शारीरिक रूपमा पुरुष वा स्त्रीजस्ता देखिए पनि भावनात्मक वा मनोवैज्ञानिक रूपमा ठीक उल्टो आचरण गर्छन् । यसको जिनेटिक कारण हुन्छ । उनीहरू आफ्नै लिंगीका मान्छेसँग यौनमात्र होइन, भावनात्मक रूपमा पनि आकर्षित हुन्छन् । समाज वा परिवारबाट उनीहरूलाई जतिसुकै यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन दबाब आए पनि यसबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । उनीहरू आफ्नो इच्छा वा रहरले यस्तो भएका पनि हुँदैनन् । अर्को अर्थमा उनीहरूको सृष्टि नै यसै रूपमा भएको हुन्छ ।
व्यावहारिक वा पछि सिकेर समलिंगी यौनसम्पर्क राख्नेहरू संगतले वा रहरले पनि हुन्छन् । उनीहरू समलिंगी सम्पर्क सँगसँगै विपरीत लिंगीसँग समेत आचरण गरेर समलिंगी र दाम्पत्य दोहोरो जीवन बिताउन सक्षम हुन्छन् । उनीहरू यथार्थमा समलिंगी नै होइनन् । जो यर्थाथमा समलिंगी हुन्छन्, उनीहरूले त्यसै रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ । उनीहरू अल्पसंख्यक यौनव्यवहार गर्ने व्यक्ति हुन् । विचलित वा रोगी होइनन् भन्ने तथ्य हाल विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार भइरहेको छ । दक्षिण अफ्रिका, क्यानडा र अमेरिकाका केही प्रान्तमा तथा स्क्यान्डिनेभियाली देशहरूमा यस्ता व्यक्तिलाई विवाह गर्ने कानुनी अधिकार पनि प्राप्त छ या हुने क्रममा छ ।
यस्तो व्यवहारलाई अल्पसंख्यक यौनव्यवहार मानेर अपराध र रोगको श्रेणीमा नलिने कुरा त आधुनिक विश्वमा सर्वस्वीकृत भइसकेको छ । म २५ वर्षीया विवाहिता हुँ । हाम्रो बिहे भएको दुई वर्ष भयो । श्रीमान् समझदार हुनुहुन्छ । सेक्सको बेला हामी विभिन्न आसन प्रयोग गर्छौं । तर, मलाई चरमसुख प्राप्त हुँदैन । के नपुगेको, के नपुगेको जस्तो हुन्छ । किन होला ? अनि चरमोत्कर्ष के हो ? महिलाले सजिलै चरमसुख पाउँदैनन् भनिन्छ नि ?
यौनसाथीसँगको सम्बन्धमा कुनै जटिलता वा अस्पष्टता छ भने पनि स्त्रीहरूले चरमसुख अनुभव गर्न सक्दैनन् । अत्यन्त सहज अवस्थामा भावनात्मक लगावको तीव्रता, सुरक्षाको प्रत्याभूति र यौनक्रियमा संलग्न पुरुषको आफूप्रति इमानदारीमा सन्तुष्ट भएपछि मात्र स्त्रीले चरमसुख प्राप्त गर्न सक्छन् । पुरुषको जस्तो उत्तेजित अवस्थामा शारीरिक निकटताबाट मात्र स्त्रीमा चरमसुखको अनुभूति हुँदैन । त्यसैकारण पनि भन्ने गरिन्छ, बहुसंख्यक स्त्रीले यौनसम्पर्कको बेला चरमसुख प्राप्त गर्दैनन् तर पुरुषले चरमसुख प्राप्त नगरी यौनसम्पर्क टुंगिदैन । सुक्रबार नगरिकबाट